121 taona Taty Aoriana Vao Nisy Mpihira Tompotany Niantsehatra Tao Amin’ny Teatro Amazonas Tao Brezila · Global Voices teny Malagasy
Vakio amin'ny teny English, Français, Español, русский, 日本語, 繁體中文, Deutsch, Português
Djuena Tikuna nandritra ny fampisehoany tao amin'ny Teatro Amazonas. Sary: pikantsary, Jornalistas Livres (Youtube)
Tamin'ny 23 Aogositra, i Djuena Tikuna no mpihira indizeny voalohany nanao fampisehoana tao amin'ny Teatro Amazonas (” Teatira Amazonas”) – fanamafisana ny kolontsaina Eoropeana eo afovoan'ny ala tropikaly lehibe indrindra erantany.
Namokatra sy nalaza tamin'ny fanombohany ny asany Tchautchiüãne, na “ilay tanànako” amin'ny fiteny Tikuna ilay mpanakanto 32 taona. Aingam-panahy avy amin'ny vanim-potoana firoboroboan'ny fingotra Amazoniana ilay rakikira, izay nahitana ny fitrandrahana goavambe amin'ny hazo fingotra tao amin'ny faritra – sy ny mponina tao amin'ny faritra – nanomboka tamin'ny fiodinan'ny taonjato faha- 20.
Iray amin'ireo fanjakanamanana mponina indizeny betsaka indrindra ny fanjakan'i Amazonas, mandrafitra manodidina ny 17% amin'ireo mponina indizeny miisa 896.000 monina any Brezila amin'izao fotoana izao.
Avy amin'ny vahoaka Tikuna i Djuena – vondrom-poko indizeny lehibe indrindra ao Brezila – ary milaza azy ho “mpihiran'ny hetsika indizeny” izy. Araka ny voalazan'i Djuena, vahoaka “tena tia mozika” ny Tikuna; araka ny notantarain'ny reniny taminy, sy notantarain'ny renibeny tamin'ny reniny, ary ny razambeny kosa no nilaza izany tamin'ny renibeny.
Feno ny fomba fisainan'ny mpikatroka ny tononkirany; Miresaka ny zava-dehibe amin'ny fiarahamoniny izany , toy ny tontolo iainana sy ny famaritana ny tany. Ny fihirany amin'ny fiteny Tikuna no tena zava-dehibe , izay safidiny ara-politika :
Tsy miteny intsony ny fiteniny ny olona sasany Azonao an-tsaina ve raha mihira amin'ny teny Portiogey aho? Te hanao toa ahy ireo tanora mijery ahy. Mila mitana ny fiteninay sy ny mari-panondroanay izahay na dia ao an-tanàndehibe aza.
Mba hahafantarana ny maha-zava-dehibe ilay fampisehoany ho an'ny vahoaka indizeny Breziliana dia ilaina ny manao jery todika ny tantaran'ity Teatro Amazonas ity.
Novolavolain'ny Ivontoeram-pampianarana Portiogey ho an'ny Injeniera sy ny Fanaova-Maritrano ao Lisbonne ny tranobe, ao afovoan'i Manaus, renivohitry ny fanjakana Amazonas, ary notokanana tamin'ny taona 1896, nandritra ny firoboroboan'ny fitrandrahana fingotra tao amin'ny faritra.
Raha niditra tamin'ny dingana voalohany ny vanim-potoan'ny indostrian'ny fiarakodia dia nanaporofo ny fahitana ny fitrandrahana fingotra avy amin'ny hazo seringueira – izay hita matetika ao Amazona – fa tena raharaham-barotra nampidi-bola tokoa izany ary nahasarika mpampiasa vola, mpandraharaha, mpifindrafindra monina ary mpiasa maro avy any amin'ny faritra hafa tao Brezila.
Nampiasa ny teknikan'ireo tompotany ny indostria mba hangalana ny fingotra voajanahary avy amin'ny hazo, ary nahatonga ny renivohitry ny fanjakana any avaratr'i Brezila ho anisan'ireo manankarena indrindra ao amin'ny firenena ny harena nentiny. Ho fanehoana tanjaka amin'ity harena vaovao ity, nanolo-kevitra sy nanohana ara-bola ny fananganana ny Teatro Amazonas ny sangany tao an-toerana – tetikasa iray izay naorin'ny mpiasa tompotany.
Tsy ny fiovàn'ny olona indizeny maro ho mpiasa mahantra ihany no hany fahavoazana vokatry ny firoboroboan'ny fitrandrahana fingotra fa nahitana fandroahana faobe ireo foko samihafa tao amin'ny taniny ihany koa ity vanim-potoana ity.
121 taona izay no lasa raha nanorina ny Teatro Amazonas ireo mpiasa tompotany, ary voalohany izao no niakatra an-tsehatra ny mpanankato tompotany tao amin'ny iray amin'ireo vakoka manan-danja indrindra tamin'izany vanim-potoana izany.
Nandao ny tanànakely i Djuena raha mbola kely izy ary nandeha nonina tany Manaus. Tao amin'ny sombin-dahatsoratra notaterin'ny tranonkala Jornalistas Livres, dia nilaza izy fa avy amin'ny fanontaniana iray napetrany hoe: “Nahoana aho no tsy afaka mihira ao? Satria ve aho tompotany? ” ny hevitra noraisiny mba hanaovana ny fampisehoany ao amin'ny Teatro Amazonas.
Rehefa nihira niaraka tamin'izy ireo an-tsehatra tao amin'ny Teatro Amazonas aho, ary nagodogodonay ny tongotray dia fomba iray ho ahy izany hilazako hoe: eto izahay, ry mpiray foko. Nijaly ianareo noho ity tranobe ity , saingy eto izahay, mbola manohy miady eto izahay ary mifikitra mijoro eto.
Nifarana tamin'ny fitakiana ny “Demarcação já!” (“Farito ny [tany] izao!”) ny lahatsary izay anisan'ny ao anatin'ny fanentanana - anisan'izany ny hiran'ny hetsi-panoherana navoakan'ireo mpanakanto tamin'ny fiandohan'ity taona ity mba hiarovana ireo tanin'ny tompotany sisa tavela amin'ny alàlan'ny fiantohana fankatoavana ara-dalàna feno, olana izay vao mainka nohalefahina mandritra izao fitondran'ny governemantan'ny filoha Breziliana Michel Temer izao .